Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo! Duulli Waraanaa Ilmaan Oromoo Wallootti Baname Eenyummaa Oromummaa Balleessuuf kan Aggaammatedha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo! Duulli Waraanaa Ilmaan Oromoo Wallootti Baname Eenyummaa Oromummaa Balleessuuf kan Aggaammatedha.
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo! Duulli Waraanaa Ilmaan Oromoo Wallootti Baname Eenyummaa Oromummaa Balleessuuf kan Aggaammatedha.
Akka seenaan saba Oromoo nu barsiisetti Oromoo cabsuudhaaf duulli jalqabaa kan eegale ilmaan Oromoo Walloo irratti. Duulli Oromoo cabsuudhaaf karaa kaabaa jaarraa 15ffaa keessa eegale haga walakkeessa jaarraa 19ffaatti Oromoon kaabaa gootummaa guddaafi ijaarsa cimaatiin lolatee diina isa weeraree koloneeffachuuf yaalu qolataa tureera. Ofirraa qolachuu qofas utuu hin taane, bulchiinsa jajjabaa ijaarratanii weerartoota irratti dhiibbaa gochaa turaniiru. Mootota Gondor akka barbaadanitti to’atanii nama barbaadan aangootti baasanii kan hin barbaanne buusaa turaniiru.
Walakkeessa jaarraa 19’ffaa keessa garuu haalli jijjiiramee mootiin Tewoodiroos imaammata gurguddaa sadii (1, Oromoo cabsuu, 2. Habashaa tokkoomsuufi 3. Isilaamummaa balleessuu) labsate. Labsiin kun ilmaan Oromoo Walloo irratti hojiitti hiikamuu eegale. Tewoodiroos mootii moototaa jedhee erga of moggaasee Waxabajji 1855 duula waraanaa Oromoo Walloo irratti bobbaase. Duula waraanaa kanaan humni waraanaa Tewoodiroos gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo duguuguu eegalan. Oromoota ajjeesuu bira darbanii kanneen booji’anillee harka isaanii lamaan muranii mormuma isaaniitti diranii deemsisu. Haala kanaan Oromoo Walloo cabsee gara Shawaatti darbe.
Lola kanaan Oromoo Walloo haa cabsuyyu malee takkaayyu of jalatti bulchuu hin dandeenye. Tulluu Maqdallaa qabatee waraana itti fufe. Ilmaan Oromoo Walloos lola itti fufuun gootummaa dinqisiisaa argisiisaniiru. Tewoodiroos lola waggoota 13 Oromoo Walloo irratti taasise keessatti tasayyu jilbeenfachiisee of jalatti hin bulchine.
Duulli qindaa’aan Oromiyaa dhuunfachuuf taasifamaa jiru kan mootummaa Federaalaan deeggaramee Mootummaa Naannoo Amaaraan hojiitti hiikamaa jiru bifa haaraan eegalee ilmaan Oromoo Wallootti banameera. Maqaa Waraana Bilisummaa Oromoo da’eeffatanii Oromoo balleessuuf dhaadatanii dhaadannoo sana hojiirra oolchuuf akka ka’umsaatti Kaaba Oromiyaa – Walloo magaalaa Axaayyeetti waraana banan. Dhiyeenya kana Perezedaantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa Agenyew Teshager “Addi Bilisummaa Oromoo diina keenya seenaati; ni lolla” jechuun dubbachuun ni yaadatama. Dubbii summaawaa kana hordofee ilmaan Oromoo irratti kallattii adda addaan lolli itti fufe.
Humna Addaa Naannoo Amaaraatiin lubbuun ilmaan Oromoo hedduun darbee jira. Ajjeechaa gara jabeenyaa namoota gara mana yaalaa deeman irratti ambulaansii keessaa buusanii raawwataniiru. Kun agarsiistuu boora’insa nagaa biyya kanaafi duguuggaa Oromo irratti aggaamamedha jennee amanna.
Oromoota Walloo irraati Duguggaan sanyii raawatama jira.